ဘုရားရှိခိုးဖို့ ဝနျလေးတာ ၊ ဘုရားရဲ့တရားတျောတှကေို ယုံကွညျမှုလြော့နညျးလာတာ သငျတဈယောကျတညျးမဟုတျပါဘူး ( လူငယျဖတျဖို့) – Daily Feed MM
ယခု သတငျးကို ( Ven Nandacara ) စာမကျြနှာမှ တဈဆငျ့ ပွနျလညျ မြှဝေ တငျဆကျခွငျး ဖွဈပါသညျစိတျထဲကနေ မွတျစှာဘုရားကို မရညျရှယျဘဲ ဆဲဆိုနမေိခွငျး မိုကျမိုကျရိုငျးရိုငျး ပွဈမှားနမေိရတဲ့ အကွောငျးအရငျး
ဘာသာရေး ကိုးကိုယျယုံကွညျမှုမှာ ဖွဈတတျတဲ့ ထူးဆနျးသော စိတျတဈခု အကွောငျးပွောပွပေးခငျြပါတယျဘုရားကနျတော့တဲ့အခါ ဘုရားဆငျးတုတျောတှေ ရှရေ့ောကျတဲ့အခါ မွတျစှာဘုရားရဲ့ မကျြနှာတျောကို စစေ့မေ့ကွညျ့ရဲတဲ့ စိတျခံစားမှုပွဿနာ… ဒီလိုဖွဈကွတာ လူတျောတျောမြားမြားဖွဈကွတယျလို့ သိရတယျ။အမြိုးသမီးတှမှော အဖွဈမြားကွတယျလို့ပွောပွီး အမြိုးသား အမြားစုလညျး ဖွဈတဲ့သူတှရှေိတာကိုတှရေ့တယျ။လူငယျ ဆယျကြျောသကျတှမှော
အဖွဈမြားတယျလို့လညျး ပွောလို့ရတယျ။မွတျစှာဘုရားကို အာရုံပွုတဲ့အခါဖွဈစေ မွတျစှာဘုရားရဲ့ မကျြနှာတျောကို မွငျတဲ့အခါဖွဈစေ စိတျမှာ ပွဈမှားလိုတဲ့ စိတျတှဖွေဈလာကွတယျ။ဒီလို ဖွဈတဲ့အကွိမျမြားလာတော့ မွတျစှာဘုရားနဲ့ ဝေးရာကို ရှောငျနကွေတော့တယျ။ အပွဈဖွဈမှာ စိုးရိမျနတောကွောငျ့ ဘုရားကနျတောဖို့ ဝနျလေးလာကွတယျ။ဒီစိတျပိုငျးဆိုငျရာ ပွဿနာကို ဗုဒ်ဓစိတျပညာရှုထောငျ့ကနေ လလေ့ာကွညျ့သငျ့ပါတယျ။ အခြို့ကတော့ ပယောဂလို့ ဆိုပွီး အခြို့က ပရလောကနဲ့ ဆကျနှယျတဲ့ အကွောငျးအရာတှကွေောငျ့လို့ ဆိုကွသလို အခြို့ကတော့ စိတျရောဂါသီးသနျ့လို့ ဆိုကွပါတယျ။ဒါကတော့ ရှုထောငျ့မြိုးစုံနဲ့ အဖွမြေိုးစုံ ဖွဈနမှောပါပဲ။ ပထမဆုံး ဖွဈနိုငျတာက “OCD BLASPHEMOUS
THOUGHTS” လို့ချေါတဲ့ ဘုရား.. တရား.. သံဃာနဲ့ ဘာသာရေးခေါငျးဆောငျတှကေို ပွဈမှားတဲ့အတှေးတှေ တှေးမိတဲ့ စိတျပိုငျးဆိုငျရာ ပွဿနာ တခြို့က စိတျမှာ ရတနာသုံးပါးကို ကွညျညိုသျောလညျး ထူးဆနျးတဲ့ အတှေးတှပေျေါတယျ။ဘုရားကနျတော့နရေငျး ဆှမျးလောငျးနရေငျး တရားစာရှတျနရေငျးပေါ့။ ဘုရားကနျတော့နရေငျး ဘုရားဆငျးတုကွီးကို ရိုကျခငျြနှကျခငျြလာတယျ ကနျကွောကျခငျြလာတယျ။ဆှမျးလောငျးနရေငျး ရဟနျးကို တံတှေးနဲ့ထှေးခငျြ
လာတယျ။ တရားစာရှတျဖတျနရေငျး စာရှကျတှေ ဆှဲဖွဲခငျြလာတယျ။ တခြို့က လိငျစိတျတှဖွေဈလာတယျ။ လိငျပိုငျးဆိုငျရာ စျောကားလိုစိတျတှဖွေဈလာတယျ။အဲ့လိုတှဖွေဈကွတယျ.. ဒါကို Obsessive-compulsive disorder ခေါငျးစဉျအောကျမှာ OCD BLASPHEMOUS THOUGHTS လို့ချေါတယျ။နောကျအမညျတခုနဲ့ Instrive Thoughts လို့လညျး ချေါတယျ။ သုတသေနအရ လူ တှမှော ၉၄% လောကျအထိဖွဈကွတယျလို့ ဆိုတယျ။ instrive thoughts တှမှော အထကျမှာပွောသလို aggressive thoughts တှေ ရှိသလို sexual thoughts တှလေညျး ရျှတယျ။အသကျ ၄၀ အောကျမှာ ပဲ အဖွဈမြားပွီး အသကျ၄၀-၆၀ ကွားတှမှောတော့ OCD ရောဂါရှိသူတှပေဲ ဖွဈ
ပါတယျ။ ဖွဈလဖွေ့ဈထ ရှိတဲ့ စိတျသဘာဝမို့ သတိလေးထားပွီး နသေငျ့ပါတယျ။အဲ့လို စိတျတှဖွေဈလာပွီဆိုရငျ သတိလေးနဲ့ နသေငျ့ပါတယျ။ အရမျးဆိုးဆိုးဝါးဝါးဖွဈလာတယျဆိုရငျတော့ စိတျပညာရှငျနဲ့ ဆှေးနှေးသငျ့ပါတယျ။ာကျတဈခုက အတိတျကာလက ပွုထားတဲ့ ဒုစရိုကျ တရားတဈခုခုကွောငျ့ ဖွဈလရှေိ့တဲ့ moral shaming ကွောငျ့ ဖွဈလာတဲ့ စိတျရောဂါ တဈခုလို့လညျး ယူဆကွတယျ။သာမညဖလသုတျမှာလာတဲ့ အဇာတဘုရငျရဲ့ စိတျသောကကို
သခြော လလေ့ာကွညျ့ရငျ ဒီလိုမြိုးကို တှနေို့ငျတယျ။ အဇာတ ဘုရငျလညျး cognitive therapy နဲ့ကုဖို့ အကွိမျကွိမျကွိုးစားခဲ့တယျ။ဒါပမေယျ့ နောကျဆုံးမှာ behavioral therapy အသှငျ သီလအားဖွငျ့ ကုသတဲ့ အခါမှာတော့ ယငျးစိတျရောဂါပြောကျကငျးခဲ့တယျ။ဒီတော့ moral anxiety လို့ ယူဆလို့လညျး ရတယျ။ ဒါက ဒုတိယ အမွငျ… နောကျဆုံး အနနေဲ့ တဈခုကတော့ Culture Bound Syndome DSM IV-TR မှာ Culture Bound
Syndome လို့ ဖျောပွပွီး DSM-5 မှာတော့ Cultural Concepts of Distress လို့ ဖျောပွတယျ။မွနျမာပွညျအယူအဆတှနေဲ့ စပျဆကျတှေးကွညျ့တဲ့အခါ နတျကိုးကှယျမှုတှေ ပယောဂ တှနေဲ့ သကျဆိုငျတဲ့ အခကျြတှကေို တှရေ့ပါတယျ။ ပုဂံခတျေ နတျကိုးကှယျမှု သမိုငျးတှနေဲ့ ဗုဒ်ဓဘာသာ ခတျေပွောငျးတျောလှနျရေး သမိုငျးတှကေို လလေ့ာကွညျ့တဲ့အခါ cultural concept နဲ့ပါတျသကျတဲ့ distress တှေ အခွား abnormal behavioral
problems တှကေို တှရေ့ပါတယျ။မွနျမာတှအေသိမြားတဲ့ နတျကိုငျတာတို့ ပယောဂတိုကျတာတို့ စသညျဖွငျ့ပေါ့။ မာနျနတျရဲ့ လှဲ့စားမှုလညျး ထဲ့တှကျရမှာပေါ့။ ဒါတှကေလညျး သကျဆိုငျရာ ယုံကွညျမှုတှနေဲ့ ခဉျြးကပျပွီး ကုသသငျ့ပါတယျ။မှားတာ မှနျတာကို အဖွရှောတာထကျ client ရဲ့ စိတျပိုငျးဆိုငျရာ လုံခွုံပွညျ့ဝစမှေုကို ရှေးရှုသောအားဖွငျ့ ဆောငျရှကျစသေငျ့ပါတယျ။ စိတျပညာရှငျ တဈယောကျအနနေဲ့ မယုံကွညျဘူး မဖွဈနိုငျဘူးလို့တော့ တပျအပျပွောလို့ မရဘူး။ Parapsychology, Demonology စသညျဖွငျ့ ဘာသာရပျ နယျပယျတှနေဲ့ လလေ့ာမှုတှလေညျး ရှိတဲ့အပွငျ ရှမှေ့ာပွောခဲ့သလို DSM မှာလညျး ပါနတေော့ လကျခံပွီး မိမိတို့ ဆိုငျရာ ရှုထောငျ့ကနေ လလေ့ာသငျ့ပါ
တယျ။ကုစားဖို့က အရေးကွီးတာ ကိုယျတဈယောကျထဲ ဖွဈနတေယျလို့ မထငျပါနဲ့။ ဒီလိုဖွဈနတော အမြားကွီးပါ။ ဗုဒ်ဓဘာသာတှတေငျ မကပဲ အခွား ဘာသာခွားတှလေညျး သူတို့ ဘုရားကို အဲ့လို စိတျတှဖွေဈတတျပါတယျ။
ရတနာသုံးပါးကိုတငျမကဘူး မိဘ ဆရာသမားတှေ မိမိလေးစားရတဲ့သူတှေ အပျေါမှာလညျး ဖွဈတာကိုတှရေ့ပါတယျ။ ကောငျးတာကတော့ ခငျပှနျးကွီးဆယျပါး ရှဈခိုးခွငျး၊ သီလကို ပွုပွငျခွငျး စောငျ့ထိနျးခွငျးဖွငျ့ ကြျောလှားနိုငျမယျလို့ မွငျပါတယျ။Modern Psychotherapy မှာဆိုရငျတော့ DBT လို therapy မြိုးနဲ့ ကုမယျထငျပါတယျ။ DBT နဲ့ CBT ဟာ အနညျးငယျကှဲလှဲမှု ရှိတယျ။ သို့ပမေယျ့ ပထမလို moral ကွောငျ့ ဖွဈတဲ့ case တှမှော DBT ကိုသာ
ဦးစားပေးရမယျလို့ မွငျပါတယျ။cultural ရှုထောငျ့ကနေ ကုစားမယျဆိုရငျတော့ CBT ကို အဓိကထားပွီး ကုသရမယျလို့ မွငျပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ သကျဆိုငျသူတို့ ယုံကွညျရာ folk religions တှကေ ဆိုငျရာ ဆရာမြားနှငျ့လညျး ကုသသငျ့ပါတယျ။ (တခြို့က ကိုယျတိုငျတော့ နတျမယုံပါဘူး ဒါပမေယျ့ မိဘက နတျကိုးကှယျတာတှရှေိခဲ့တဲ့ အစဉျအလာကွောငျ့လညျး ဖွဈတတျပါတယျ။ အကယျြကိုတော့ Culture Bound Syndome symptoms & cases
တှကေို ကွညျ့ပါ။ )ဒါ့အပွငျ ပရိတျတရားတျောမြား ရှတျဖတျပေးခွငျး ရှတျဖတျစခွေငျး ၊ မတ်ေတသုတျ ၊ ရတနသုတျ၊ အာဋာနာဋိယသုတျ၊ ပုဗ်ဗဏှသုတျ စသညျတို့ကို အထူးပွုရှတျဘာသျစပွေီး၊ မတ်ေတာပို့ခွငျးကိုလညျး မပကျြဆောငျရှကျပါ။ဤအခကျြမြားကို ပွုခွငျးအားဖွငျ့ ကြျောလှားနိုငျမညျဟု ယုံကွညျပါသညျ။ စိတျမှာ ပွဈမှားမိနလေို့ အကုသိုလျဖွဈမှာ စိုးတယျဆိုပွီး ရှောငျနတောကတော့ အဖွမေဟုတျပါ။ပွီးတော့ အရမျးလညျး အစိုးရိမျ မလှနျစလေို
ပါ။ အသကျအရှယျ အပိုငျးအခွားတဈခုရောကျရငျလညျး အလိုလိုပြောကျသှားနိုငျပါတယျ။ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ရငျဆိုငျပွီး ကြျောဖွတျနိုငျကွပါစေ။
#Nandacar Intrusive Thoughts Post
မဖိတျချေါပဲ ရောကျလာသော အတှေးမြား ယမနျနကေ့ လူမှုကှနျယကျမှာ စိတျပိုငျးဆိုငျရာ ပွဿနာ တဈခုအကွောငျးကို တငျခဲ့ပွီး ယငျး ဆောငျးပါးဟာ လူငယျအမြားစုကွားမှာ ပွနျ့နှံ့ခဲ့တယျ။မွနျမာပွညျမှာတော့ အမြားစုဟာဒ်ဓဘာသာဝငျတှဖွေဈတဲ့အတှကျ ဘုရား တရား သံဃာအပျေါမှာ ရိုသလေေးစားမှု မကောငျးမပွုလိုမှု၊ မပွဈမှားလိုမှု ရှိကွတယျ။ဒါပမေယျ့ မိမိတို့ကိုယျတိုငျကိုယျက ရတနာသုံးပါးအပျေါမှာ ကွညျညိုပါလြှကျနဲ့ မပွဈမှားခငျြပဲ ရှိ
သျောလညျး တဈခါတဈရံ ဘုရားရှဈခိုးနတေဲ့အခါ ဘုရားဆငျးတု၊ ဘုရားရုပျပုံ စတာတှကေို အကွမျးဖကျ လိုလာတာမြိုးတှေ၊ လိငျပိုငျးဆိုငျရာ ရာဂဖွဈလာမြိုးတှေ ဖွဈတတျကွတယျ။တရားစာတှေ ရှတျနရေငျးနဲ့လညျး ထို့အတူပငျ၊ မိမိတို့လေးစားအားကရြသော ဆရာတျောကွီးမြားကို တှရေ့ ဖူးရ လြှငျလညျး ထိုသို့သော အကွမျးဖကျလိုမှုတှေ ပွဈမှားခငျြစိတျတှေ မဖွဈခငျြပဲ ဖွဈလာတတျတယျ။ရတနာ သုံးပါးမှာမှ အဲ့လိုမဟုတျဘူး မိဘတှကေိုလညျး တဈခါ
တဈရံ ဖွဈပွီး ဆရာသမားတှေ လေးစားရတဲ့ လူကွီးသူမတှအေပျေါကိုလညျး အဲ့လိုစိတျခံစားမှုတှေ ဖွဈလာတတျတယျ။မိမိတို့ ကိုးကှယျရာ ယုံကွညျရာ အားထားရာတှေ အပျေါကို ဒီလိုစိတျရိုငျးတှဖွေဈလာတဲ့အခါ အပွဈတှဖွေဈမှာကို စိုးရိမျကွတယျ။ ဒီတော့ ခပျရှောငျရှောငျနလောကွတော့တယျ။ ဘုရားကနျတော့ဖို့ ဝနျလေးလာတယျ၊ တရားစာရှတျဖတျပူဇျောဖို့ စိုးရှံ့လာတယျ။ဒါနဲ့ပဲ ကုသိုလျတရားတှနေဲ့ ဝေးလာတဲ့ အဖွဈမြိုးဖွဈလာတယျ။ ဒီနမှေ့ာတော့ ဒီစိတျမြိုးကို
ဘာကွောငျ့ဖွဈတာလဲ၊ ဘယျလိုဖွဈလာတာလဲ ၊ ဘယျလို ကြျောလှားမလညျး ဆိုတဲ့အကွောငျးကို ပွောပွပေးသှားပါမယျ။ဒီလိုဖွဈတာကို ဝေါဟာရအားဖွငျ့တော့ မဖိတျချေါပဲ ရောကျလာသော အတှေးမြား (Intrusive Thoughts) လို့ချေါပါတယျ။ သုတသေနစဈတမျးတှေ အရ ဒီလိုဖွဈနတော အသကျ၁၀ နှဈမှ ၄၀ ကွားက လူတှေ ရဲ့ ၉၄% အထိဖွဈပါတယျ။အမရေိကနျနိုငျငံမှာဆိုရငျ လူငယျဦးရေ ၆သနျးလောကျ ခံစားရတယျလို့ စဈတမျးတှကေ ဆိုပါတယျ။
ဒီတော့ ကိုယျတဈယောကျတညျး ဖွဈနတော မဟုတျဘူးဆိုတာကို အမွဲသိထားစလေိုပါတယျ။မဖိတျချေါပဲ ရောကျလာတဲ့ အတှေးတှကေ အမြိုးမြိုးဖွဈနိုငျတယျ။ တခြို့က အကွမျးဖကျလိုစိတျ၊ တဈခြို့က ကာမရာဂစိတျ၊ တဈခြို့က ဘုရား တရား သံဃာနှငျ့ အခွားသော ဘာသာရေးဆိုငျရာပုဂ်ဂိုလျတှေ၊ ဆရာတှကေို ဆဲဆိုကွိမျးမောငျးလိုမှု၊ အျောဟဈရမျးကားလိုမှု၊ လိငျပိုငျးဆိုငျရာ ပွဈမှားလိုမှုမြားဖွဈကွပါတယျ။ဒါတှကေ မဖိတျချေါပဲ ဖွဈလာတဲ့ အတှေးတှပေါ။
စိတျရောဂါလညျး မဟုတျသလို အပွဈကွီးလညျး မဟုတျဘူး ဆိုတာကိုတော့ ဦးစှာ သိထားရပါမယျ။ လူတှေ အမြားစုက ရှကျလို့သာ မပွောကွတာ တျောတျောမြားမြားမှာ ဒီပွဿနာရှိပါတယျ။ ဒီတော့ သိပျကွီး အစိုးရိမျ မလှနျဖို့ ဦးစှာ ပွောလိုပါတယျ။ထပျခါထပျခါ နစေ့ဉျရကျဆကျ ဆိုသလို ဘုရားရှမှေ့ာ ဖွဈစေ မိမိတဈကိုယျတညျး နတေဲ့အခါဖွဈစေ အတှေးတှဖွေဈလာပွီ၊ အတှေးထဲက အတိုငျး လကျတှမှေ့ာ လုပျဆောငျလာပွီဆိုရငျတော့ စိတျပညာရှငျတှေ
နဲ့ နှီးနှောတိုငျပငျပွီး ကုစားဖို့ သငျ့ပါတယျ။Intrusive Thoughts တှကေ တဈခါ တဈရံ Obsessive-compulsive disorder (OCD), depression, body dysmorphic disorder (BDD), attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD), posttraumatic stress disorder(PTSD), anxiety disorders, eating disorders, စတဲ့ စိတျရောဂါတှနေဲ့ စပျဆိုငျနတေတျပါတယျ။ဒါကွောငျ့ လှနျကဲလာပွီဆိုရငျတော့
ပညာရှငျတှနေဲ့ တှဖေို့ လိုပါပွီ။ ပုံမှနျကတော့ လူတိုငျးနီးပါး ၊ လူငယျတှမှော အထူးသဖွငျ့ ဖွဈနကေပြါ။ဒီတော့ တဈယောကျတညျး လို့ မထငျပါနဲ့ ၊ ဗုဒ်ဓဘာသာတှမှေ မဟုတျပါဘူး အခွားဘာသာဝငျတှမှောလညျးဖွဈပါတယျ။ ခရဈယာနျ ဘုနျးတျောကွီး Martin Luther နဲ့ Ignatius of Loyola တို့ ဆိုရငျလညျး သူတို့ရဲ့ ဘုရားသခငျ ယရှေုခရဈရဲ့ ပုံကိုကွညျ့ရငျး၊ ဝတျပွုဆုတောငျးရငျး အကွိမျကွိမျ ပွဈမှားလိုစိတျတှေ ဖွဈခဲ့ပွီး စိုးရိမျကွောကျလနျ့
ခဲ့တယျလို့ ဝနျခံထားတာ ရှိပါတယျ။ဒီတော့ ဒီလို လူတိုငျးဖွဈနတေဲ့ ၊ ဖွဈနိုငျတဲ့ ၊ မချေါပဲ ရောကျလာတဲ့ အတှေးမြားကွောငျ့ စိုးရိမျကွောကျလနျ့မနသေငျ့ပါဘူး။ ဘယျလိုကုစားမလညျး ဆိုရငျတော့ ဖွဈလာတဲ့ အခါတိုငျး ဖွဈတဲ့စိတျလေးကို သတိထားလိုကျပါ။ သတိနဲ့ ကွညျ့လိုကျပါ။ ဘာမှ ဆုံးဖွတျခကျြမပေးပါနဲ့။ကွောကျစရာလညျး မလိုသလို၊ ငါတော့ အကုသိုလျတှမြေားတော့မှာပဲ ငရဲရောကျတော့မှာပဲဆိုပွီးလညျး စိုးရိမျမနပေါနဲ့။ ဖွဈလာတဲ့အခါ အဲ့ဒီ
စိတျလေးကို သတိလေးနဲ့သာ ကွညျ့လိုကျပါ။ ကုသိုလျတောငျ ဖွဈပါသေးတယျ။ကိုယျ့ရဲ့ စိတျကို ကိုယျသတိနဲ့ ကွညျ့တာကို တရားအားထုတျတယျလို့ ချေါတာပါပဲ။ အနောကျတိုငျး စိတျပညာကုထုံးတှကေလညျး ဒီစိတျ အခွနေအေတှကျ Mindfulness လို meditation နညျးတှေ ညှနျးပါတယျ။ ဆေးတှအေနနေဲ့တော့ SSRi, antidepressants, နဲ့ SRi ဆိုတဲ့ ဆေးတှေ ပေးပါတယျ။
စိတျကုထုံးတှေ အနနေဲ့တော့ Cognitive Behavioral Therapy (CBT) နဲ့ Emotion Regulation Therapy (ERT) စတာတှေ ဆောငျရှကျပါတယျ။ ကြျောလှားနိုငျဖို့အတှကျ အကွံပေးပါမယျ ၁- တဈယောကျတညျး လို့မခံယူပါနဲ့၊ လူတျောတျောမြားမြားဖွဈနပေါတယျ၂- အပွဈအကွီးကွီး ဖွဈပွီဆိုပွီး ကွောကျရှံ့မနပေါနဲ့. ၃-ဖွဈလာတဲ့ အခါတိုငျး သတိလေးနဲ့ အာရုံစိုကျကွညျ့လိုကျပါ။ ၄-(သတိနဲ့ ကွညျ့မရတဲ့အခါ စိတျထဲမှာပိုဆိုးလာတယျ ထငျတဲ့အခါ)
ဝငျတဲ့လေ ထှကျတဲ့လေ တဈခါကို တဈလို့ မှတျပွီး အဲ့လို ရှဈအထိ ရတှေကျပါ။၅- တဈယောကျတညျး ဘုရားမကနျတော့ရဲ တရားမထိုငျရဲဖွဈနရေငျ သူငယျခငျြး အပေါငျးအသငျးမြား မိသားစုဝငျမြားနဲ့ အတူတူ ဘုရားကနျတော့ တရားထိုငျ ရှတျဘာသာ ပူဇျောမှုကိုပွုပါ။ (ရှောငျပွီး ထှကျပွေးနခွေငျးက အဖွမေဟုတျပါ)
၆- နစေ့ဉျရကျဆကျ ဆိုးရှားလာပွီး အပွုအမူတှပေါ ဖွဈလာပွီ၊ စိတျထဲကအတိုငျး လကျတှမှေ့ာ ပွုမူလာပွီ ဆိုရငျတော့ ကြှမျးကငျြသူ စိတျပညာရှငျနဲ့ ဆှေးနှေးသငျ့ပါတယျ။
၇- အသကျ၄၀ ကြျောရငျလညျး အလိုလို ပြောကျသှားပါလိမျ့မယျ။ အမွဲ ဖွဈမနပေါဘူး။ တဈယောကျထဲ မဟုတျဘူးဆိုတာ မမပေ့ါနဲ့၊ အမွဲမဟုတျဘူးဆိုတာ မမပေ့ါနဲ့။ သတိနဲ့ကွညျ့ဖို့ မမပေ့ါနဲ့။ လူသားတိုငျး စိတျ၏ကနျြးမာခွငျးနှငျ့ ပွညျ့စုံနိုငျကွပါစေ…..
Credit Ven Nandacara
ယခု သတင်းကို ( Ven Nandacara ) စာမျက်နှာမှ တစ်ဆင့် ပြန်လည် မျှဝေ တင်ဆက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်စိတ်ထဲကနေ မြတ်စွာဘုရားကို မရည်ရွယ်ဘဲ ဆဲဆိုနေမိခြင်း မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်း ပြစ်မှားနေမိရတဲ့ အကြောင်းအရင်း
ဘာသာရေး ကိုးကိုယ်ယုံကြည်မှုမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ ထူးဆန်းသော စိတ်တစ်ခု အကြောင်းပြောပြပေးချင်ပါတယ်ဘုရားကန်တော့တဲ့အခါ ဘုရားဆင်းတုတော်တွေ ရှေ့ရောက်တဲ့အခါ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ မျက်နှာတော်ကို စေ့စေ့မကြည့်ရဲတဲ့ စိတ်ခံစားမှုပြဿနာ… ဒီလိုဖြစ်ကြတာ လူတော်တော်များများဖြစ်ကြတယ်လို့ သိရတယ်။အမျိုးသမီးတွေမှာ အဖြစ်များကြတယ်လို့ပြောပြီး အမျိုးသား အများစုလည်း ဖြစ်တဲ့သူတွေရှိတာကိုတွေ့ရတယ်။လူငယ် ဆယ်ကျော်သက်တွေမှာ
အဖြစ်များတယ်လို့လည်း ပြောလို့ရတယ်။မြတ်စွာဘုရားကို အာရုံပြုတဲ့အခါဖြစ်စေ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ မျက်နှာတော်ကို မြင်တဲ့အခါဖြစ်စေ စိတ်မှာ ပြစ်မှားလိုတဲ့ စိတ်တွေဖြစ်လာကြတယ်။ဒီလို ဖြစ်တဲ့အကြိမ်များလာတော့ မြတ်စွာဘုရားနဲ့ ဝေးရာကို ရှောင်နေကြတော့တယ်။ အပြစ်ဖြစ်မှာ စိုးရိမ်နေတာကြောင့် ဘုရားကန်တောဖို့ ဝန်လေးလာကြတယ်။ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာကို ဗုဒ္ဓစိတ်ပညာရှုထောင့်ကနေ လေ့လာကြည့်သင့်ပါတယ်။ အချို့ကတော့ ပယောဂလို့ ဆိုပြီး အချို့က ပရလောကနဲ့ ဆက်နွယ်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကြောင့်လို့ ဆိုကြသလို အချို့ကတော့ စိတ်ရောဂါသီးသန့်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ဒါကတော့ ရှုထောင့်မျိုးစုံနဲ့ အဖြေမျိုးစုံ ဖြစ်နေမှာပါပဲ။ ပထမဆုံး ဖြစ်နိုင်တာက “OCD BLASPHEMOUS
THOUGHTS” လို့ခေါ်တဲ့ ဘုရား.. တရား.. သံဃာနဲ့ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကို ပြစ်မှားတဲ့အတွေးတွေ တွေးမိတဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာ တချို့က စိတ်မှာ ရတနာသုံးပါးကို ကြည်ညိုသော်လည်း ထူးဆန်းတဲ့ အတွေးတွေပေါ်တယ်။ဘုရားကန်တော့နေရင်း ဆွမ်းလောင်းနေရင်း တရားစာရွတ်နေရင်းပေါ့။ ဘုရားကန်တော့နေရင်း ဘုရားဆင်းတုကြီးကို ရိုက်ချင်နှက်ချင်လာတယ် ကန်ကြောက်ချင်လာတယ်။ဆွမ်းလောင်းနေရင်း ရဟန်းကို တံတွေးနဲ့ထွေးချင်
လာတယ်။ တရားစာရွတ်ဖတ်နေရင်း စာရွက်တွေ ဆွဲဖြဲချင်လာတယ်။ တချို့က လိင်စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားလိုစိတ်တွေဖြစ်လာတယ်။အဲ့လိုတွေဖြစ်ကြတယ်.. ဒါကို Obsessive-compulsive disorder ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ OCD BLASPHEMOUS THOUGHTS လို့ခေါ်တယ်။နောက်အမည်တခုနဲ့ Instrive Thoughts လို့လည်း ခေါ်တယ်။ သုတေသနအရ လူ တွေမှာ ၉၄% လောက်အထိဖြစ်ကြတယ်လို့ ဆိုတယ်။ instrive thoughts တွေမှာ အထက်မှာပြောသလို aggressive thoughts တွေ ရှိသလို sexual thoughts တွေလည်း ရ်ှတယ်။အသက် ၄၀ အောက်မှာ ပဲ အဖြစ်များပြီး အသက်၄၀-၆၀ ကြားတွေမှာတော့ OCD ရောဂါရှိသူတွေပဲ ဖြစ်
ပါတယ်။ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထ ရှိတဲ့ စိတ်သဘာဝမို့ သတိလေးထားပြီး နေသင့်ပါတယ်။အဲ့လို စိတ်တွေဖြစ်လာပြီဆိုရင် သတိလေးနဲ့ နေသင့်ပါတယ်။ အရမ်းဆိုးဆိုးဝါးဝါးဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်တော့ စိတ်ပညာရှင်နဲ့ ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။ာက်တစ်ခုက အတိတ်ကာလက ပြုထားတဲ့ ဒုစရိုက် တရားတစ်ခုခုကြောင့် ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ moral shaming ကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့ စိတ်ရောဂါ တစ်ခုလို့လည်း ယူဆကြတယ်။သာမညဖလသုတ်မှာလာတဲ့ အဇာတဘုရင်ရဲ့ စိတ်သောကကို
သေချာ လေ့လာကြည့်ရင် ဒီလိုမျိုးကို တွေ့နိုင်တယ်။ အဇာတ ဘုရင်လည်း cognitive therapy နဲ့ကုဖို့ အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားခဲ့တယ်။ဒါပေမယ့် နောက်ဆုံးမှာ behavioral therapy အသွင် သီလအားဖြင့် ကုသတဲ့ အခါမှာတော့ ယင်းစိတ်ရောဂါပျောက်ကင်းခဲ့တယ်။ဒီတော့ moral anxiety လို့ ယူဆလို့လည်း ရတယ်။ ဒါက ဒုတိယ အမြင်… နောက်ဆုံး အနေနဲ့ တစ်ခုကတော့ Culture Bound Syndome DSM IV-TR မှာ Culture Bound
Syndome လို့ ဖော်ပြပြီး DSM-5 မှာတော့ Cultural Concepts of Distress လို့ ဖော်ပြတယ်။မြန်မာပြည်အယူအဆတွေနဲ့ စပ်ဆက်တွေးကြည့်တဲ့အခါ နတ်ကိုးကွယ်မှုတွေ ပယောဂ တွေနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အချက်တွေကို တွေ့ရပါတယ်။ ပုဂံခေတ် နတ်ကိုးကွယ်မှု သမိုင်းတွေနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ခေတ်ပြောင်းတော်လှန်ရေး သမိုင်းတွေကို လေ့လာကြည့်တဲ့အခါ cultural concept နဲ့ပါတ်သက်တဲ့ distress တွေ အခြား abnormal behavioral
problems တွေကို တွေ့ရပါတယ်။မြန်မာတွေအသိများတဲ့ နတ်ကိုင်တာတို့ ပယောဂတိုက်တာတို့ စသည်ဖြင့်ပေါ့။ မာန်နတ်ရဲ့ လှဲ့စားမှုလည်း ထဲ့တွက်ရမှာပေါ့။ ဒါတွေကလည်း သက်ဆိုင်ရာ ယုံကြည်မှုတွေနဲ့ ချဉ်းကပ်ပြီး ကုသသင့်ပါတယ်။မှားတာ မှန်တာကို အဖြေရှာတာထက် client ရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုံခြုံပြည့်ဝစေမှုကို ရှေးရှုသောအားဖြင့် ဆောင်ရွက်စေသင့်ပါတယ်။ စိတ်ပညာရှင် တစ်ယောက်အနေနဲ့ မယုံကြည်ဘူး မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တော့ တပ်အပ်ပြောလို့ မရဘူး။ Parapsychology, Demonology စသည်ဖြင့် ဘာသာရပ် နယ်ပယ်တွေနဲ့ လေ့လာမှုတွေလည်း ရှိတဲ့အပြင် ရှေ့မှာပြောခဲ့သလို DSM မှာလည်း ပါနေတော့ လက်ခံပြီး မိမိတို့ ဆိုင်ရာ ရှုထောင့်ကနေ လေ့လာသင့်ပါ
တယ်။ကုစားဖို့က အရေးကြီးတာ ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲ ဖြစ်နေတယ်လို့ မထင်ပါနဲ့။ ဒီလိုဖြစ်နေတာ အများကြီးပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေတင် မကပဲ အခြား ဘာသာခြားတွေလည်း သူတို့ ဘုရားကို အဲ့လို စိတ်တွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ရတနာသုံးပါးကိုတင်မကဘူး မိဘ ဆရာသမားတွေ မိမိလေးစားရတဲ့သူတွေ အပေါ်မှာလည်း ဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ကောင်းတာကတော့ ခင်ပွန်းကြီးဆယ်ပါး ရှစ်ခိုးခြင်း၊ သီလကို ပြုပြင်ခြင်း စောင့်ထိန်းခြင်းဖြင့် ကျော်လွှားနိုင်မယ်လို့ မြင်ပါတယ်။Modern Psychotherapy မှာဆိုရင်တော့ DBT လို therapy မျိုးနဲ့ ကုမယ်ထင်ပါတယ်။ DBT နဲ့ CBT ဟာ အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှု ရှိတယ်။ သို့ပေမယ့် ပထမလို moral ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ case တွေမှာ DBT ကိုသာ
ဦးစားပေးရမယ်လို့ မြင်ပါတယ်။cultural ရှုထောင့်ကနေ ကုစားမယ်ဆိုရင်တော့ CBT ကို အဓိကထားပြီး ကုသရမယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သက်ဆိုင်သူတို့ ယုံကြည်ရာ folk religions တွေက ဆိုင်ရာ ဆရာများနှင့်လည်း ကုသသင့်ပါတယ်။ (တချို့က ကိုယ်တိုင်တော့ နတ်မယုံပါဘူး ဒါပေမယ့် မိဘက နတ်ကိုးကွယ်တာတွေရှိခဲ့တဲ့ အစဉ်အလာကြောင့်လည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အကျယ်ကိုတော့ Culture Bound Syndome symptoms & cases
တွေကို ကြည့်ပါ။ )ဒါ့အပြင် ပရိတ်တရားတော်များ ရွတ်ဖတ်ပေးခြင်း ရွတ်ဖတ်စေခြင်း ၊ မေတ္တသုတ် ၊ ရတနသုတ်၊ အာဋာနာဋိယသုတ်၊ ပုဗ္ဗဏှသုတ် စသည်တို့ကို အထူးပြုရွတ်ဘာသ်စေပြီး၊ မေတ္တာပို့ခြင်းကိုလည်း မပျက်ဆောင်ရွက်ပါ။ဤအချက်များကို ပြုခြင်းအားဖြင့် ကျော်လွားနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။ စိတ်မှာ ပြစ်မှားမိနေလို့ အကုသိုလ်ဖြစ်မှာ စိုးတယ်ဆိုပြီး ရှောင်နေတာကတော့ အဖြေမဟုတ်ပါ။ပြီးတော့ အရမ်းလည်း အစိုးရိမ် မလွန်စေလို
ပါ။ အသက်အရွယ် အပိုင်းအခြားတစ်ခုရောက်ရင်လည်း အလိုလိုပျောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ရင်ဆိုင်ပြီး ကျော်ဖြတ်နိုင်ကြပါစေ။
မဖိတ်ခေါ်ပဲ ရောက်လာသော အတွေးများ ယမန်နေ့က လူမှုကွန်ယက်မှာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာ တစ်ခုအကြောင်းကို တင်ခဲ့ပြီး ယင်း ဆောင်းပါးဟာ လူငယ်အများစုကြားမှာ ပြန့်နှံ့ခဲ့တယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့ အများစုဟာဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက် ဘုရား တရား သံဃာအပေါ်မှာ ရိုသေလေးစားမှု မကောင်းမပြုလိုမှု၊ မပြစ်မှားလိုမှု ရှိကြတယ်။ဒါပေမယ့် မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်က ရတနာသုံးပါးအပေါ်မှာ ကြည်ညိုပါလျှက်နဲ့ မပြစ်မှားချင်ပဲ ရှိ
သော်လည်း တစ်ခါတစ်ရံ ဘုရားရှစ်ခိုးနေတဲ့အခါ ဘုရားဆင်းတု၊ ဘုရားရုပ်ပုံ စတာတွေကို အကြမ်းဖက် လိုလာတာမျိုးတွေ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရာဂဖြစ်လာမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်ကြတယ်။တရားစာတွေ ရွတ်နေရင်းနဲ့လည်း ထို့အတူပင်၊ မိမိတို့လေးစားအားကျရသော ဆရာတော်ကြီးများကို တွေ့ရ ဖူးရ လျှင်လည်း ထိုသို့သော အကြမ်းဖက်လိုမှုတွေ ပြစ်မှားချင်စိတ်တွေ မဖြစ်ချင်ပဲ ဖြစ်လာတတ်တယ်။ရတနာ သုံးပါးမှာမှ အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး မိဘတွေကိုလည်း တစ်ခါ
တစ်ရံ ဖြစ်ပြီး ဆရာသမားတွေ လေးစားရတဲ့ လူကြီးသူမတွေအပေါ်ကိုလည်း အဲ့လိုစိတ်ခံစားမှုတွေ ဖြစ်လာတတ်တယ်။မိမိတို့ ကိုးကွယ်ရာ ယုံကြည်ရာ အားထားရာတွေ အပေါ်ကို ဒီလိုစိတ်ရိုင်းတွေဖြစ်လာတဲ့အခါ အပြစ်တွေဖြစ်မှာကို စိုးရိမ်ကြတယ်။ ဒီတော့ ခပ်ရှောင်ရှောင်နေလာကြတော့တယ်။ ဘုရားကန်တော့ဖို့ ဝန်လေးလာတယ်၊ တရားစာရွတ်ဖတ်ပူဇော်ဖို့ စိုးရွံ့လာတယ်။ဒါနဲ့ပဲ ကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ ဝေးလာတဲ့ အဖြစ်မျိုးဖြစ်လာတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ ဒီစိတ်မျိုးကို
ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ၊ ဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲ ၊ ဘယ်လို ကျော်လွားမလည်း ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ပြောပြပေးသွားပါမယ်။ဒီလိုဖြစ်တာကို ဝေါဟာရအားဖြင့်တော့ မဖိတ်ခေါ်ပဲ ရောက်လာသော အတွေးများ (Intrusive Thoughts) လို့ခေါ်ပါတယ်။ သုတေသနစစ်တမ်းတွေ အရ ဒီလိုဖြစ်နေတာ အသက်၁၀ နှစ်မှ ၄၀ ကြားက လူတွေ ရဲ့ ၉၄% အထိဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံမှာဆိုရင် လူငယ်ဦးရေ ၆သန်းလောက် ခံစားရတယ်လို့ စစ်တမ်းတွေက ဆိုပါတယ်။
ဒီတော့ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း ဖြစ်နေတာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို အမြဲသိထားစေလိုပါတယ်။မဖိတ်ခေါ်ပဲ ရောက်လာတဲ့ အတွေးတွေက အမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်။ တချို့က အကြမ်းဖက်လိုစိတ်၊ တစ်ချို့က ကာမရာဂစိတ်၊ တစ်ချို့က ဘုရား တရား သံဃာနှင့် အခြားသော ဘာသာရေးဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ ဆရာတွေကို ဆဲဆိုကြိမ်းမောင်းလိုမှု၊ အော်ဟစ်ရမ်းကားလိုမှု၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြစ်မှားလိုမှုများဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါတွေက မဖိတ်ခေါ်ပဲ ဖြစ်လာတဲ့ အတွေးတွေပါ။
စိတ်ရောဂါလည်း မဟုတ်သလို အပြစ်ကြီးလည်း မဟုတ်ဘူး ဆိုတာကိုတော့ ဦးစွာ သိထားရပါမယ်။ လူတွေ အများစုက ရှက်လို့သာ မပြောကြတာ တော်တော်များများမှာ ဒီပြဿနာရှိပါတယ်။ ဒီတော့ သိပ်ကြီး အစိုးရိမ် မလွန်ဖို့ ဦးစွာ ပြောလိုပါတယ်။ထပ်ခါထပ်ခါ နေ့စဉ်ရက်ဆက် ဆိုသလို ဘုရားရှေ့မှာ ဖြစ်စေ မိမိတစ်ကိုယ်တည်း နေတဲ့အခါဖြစ်စေ အတွေးတွေဖြစ်လာပြီ၊ အတွေးထဲက အတိုင်း လက်တွေ့မှာ လုပ်ဆောင်လာပြီဆိုရင်တော့ စိတ်ပညာရှင်တွေ
နဲ့ နှီးနှောတိုင်ပင်ပြီး ကုစားဖို့ သင့်ပါတယ်။Intrusive Thoughts တွေက တစ်ခါ တစ်ရံ Obsessive-compulsive disorder (OCD), depression, body dysmorphic disorder (BDD), attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD), posttraumatic stress disorder(PTSD), anxiety disorders, eating disorders, စတဲ့ စိတ်ရောဂါတွေနဲ့ စပ်ဆိုင်နေတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် လွန်ကဲလာပြီဆိုရင်တော့
ပညာရှင်တွေနဲ့ တွေ့ဖို့ လိုပါပြီ။ ပုံမှန်ကတော့ လူတိုင်းနီးပါး ၊ လူငယ်တွေမှာ အထူးသဖြင့် ဖြစ်နေကျပါ။ဒီတော့ တစ်ယောက်တည်း လို့ မထင်ပါနဲ့ ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှ မဟုတ်ပါဘူး အခြားဘာသာဝင်တွေမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ခရစ်ယာန် ဘုန်းတော်ကြီး Martin Luther နဲ့ Ignatius of Loyola တို့ ဆိုရင်လည်း သူတို့ရဲ့ ဘုရားသခင် ယေရှုခရစ်ရဲ့ ပုံကိုကြည့်ရင်း၊ ဝတ်ပြုဆုတောင်းရင်း အကြိမ်ကြိမ် ပြစ်မှားလိုစိတ်တွေ ဖြစ်ခဲ့ပြီး စိုးရိမ်ကြောက်လန့်
ခဲ့တယ်လို့ ဝန်ခံထားတာ ရှိပါတယ်။ဒီတော့ ဒီလို လူတိုင်းဖြစ်နေတဲ့ ၊ ဖြစ်နိုင်တဲ့ ၊ မခေါ်ပဲ ရောက်လာတဲ့ အတွေးများကြောင့် စိုးရိမ်ကြောက်လန့်မနေသင့်ပါဘူး။ ဘယ်လိုကုစားမလည်း ဆိုရင်တော့ ဖြစ်လာတဲ့ အခါတိုင်း ဖြစ်တဲ့စိတ်လေးကို သတိထားလိုက်ပါ။ သတိနဲ့ ကြည့်လိုက်ပါ။ ဘာမှ ဆုံးဖြတ်ချက်မပေးပါနဲ့။ကြောက်စရာလည်း မလိုသလို၊ ငါတော့ အကုသိုလ်တွေများတော့မှာပဲ ငရဲရောက်တော့မှာပဲဆိုပြီးလည်း စိုးရိမ်မနေပါနဲ့။ ဖြစ်လာတဲ့အခါ အဲ့ဒီ
စိတ်လေးကို သတိလေးနဲ့သာ ကြည့်လိုက်ပါ။ ကုသိုလ်တောင် ဖြစ်ပါသေးတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ကို ကိုယ်သတိနဲ့ ကြည့်တာကို တရားအားထုတ်တယ်လို့ ခေါ်တာပါပဲ။ အနောက်တိုင်း စိတ်ပညာကုထုံးတွေကလည်း ဒီစိတ် အခြေနေအတွက် Mindfulness လို meditation နည်းတွေ ညွန်းပါတယ်။ ဆေးတွေအနေနဲ့တော့ SSRi, antidepressants, နဲ့ SRi ဆိုတဲ့ ဆေးတွေ ပေးပါတယ်။
စိတ်ကုထုံးတွေ အနေနဲ့တော့ Cognitive Behavioral Therapy (CBT) နဲ့ Emotion Regulation Therapy (ERT) စတာတွေ ဆောင်ရွက်ပါတယ်။ ကျော်လွှားနိုင်ဖို့အတွက် အကြံပေးပါမယ် ၁- တစ်ယောက်တည်း လို့မခံယူပါနဲ့၊ လူတော်တော်များများဖြစ်နေပါတယ်၂- အပြစ်အကြီးကြီး ဖြစ်ပြီဆိုပြီး ကြောက်ရွံ့မနေပါနဲ့. ၃-ဖြစ်လာတဲ့ အခါတိုင်း သတိလေးနဲ့ အာရုံစိုက်ကြည့်လိုက်ပါ။ ၄-(သတိနဲ့ ကြည့်မရတဲ့အခါ စိတ်ထဲမှာပိုဆိုးလာတယ် ထင်တဲ့အခါ)
ဝင်တဲ့လေ ထွက်တဲ့လေ တစ်ခါကို တစ်လို့ မှတ်ပြီး အဲ့လို ရှစ်အထိ ရေတွက်ပါ။၅- တစ်ယောက်တည်း ဘုရားမကန်တော့ရဲ တရားမထိုင်ရဲဖြစ်နေရင် သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းများ မိသားစုဝင်များနဲ့ အတူတူ ဘုရားကန်တော့ တရားထိုင် ရွတ်ဘာသာ ပူဇော်မှုကိုပြုပါ။ (ရှောင်ပြီး ထွက်ပြေးနေခြင်းက အဖြေမဟုတ်ပါ)
၆- နေ့စဉ်ရက်ဆက် ဆိုးရွားလာပြီး အပြုအမူတွေပါ ဖြစ်လာပြီ၊ စိတ်ထဲကအတိုင်း လက်တွေ့မှာ ပြုမူလာပြီ ဆိုရင်တော့ ကျွမ်းကျင်သူ စိတ်ပညာရှင်နဲ့ ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
၇- အသက်၄၀ ကျော်ရင်လည်း အလိုလို ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ အမြဲ ဖြစ်မနေပါဘူး။ တစ်ယောက်ထဲ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့၊ အမြဲမဟုတ်ဘူးဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။ သတိနဲ့ကြည့်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့။ လူသားတိုင်း စိတ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ…..